Ha aaminin ereyada, talaabooyinka aaminaadda. - qarsoodi - Quotes Pedia
Ha aaminin ereyada, talaabooyinka aaminaadda. - Qarsoodi
Erayaduhu way madhan yihiin iyagoon ficil samayn. Waxaan fadhiisan karnaa oo aan ka fikirnaa waxyaabaha kaladuwan ee aan rabno inaan sameyno. In kasta oo ay aad muhiim u tahay in la qorsheeyo, laakiin waxaaba ka sii muhiimsan inaad fuliso. Hadaanan sidaas yeelin, markaa kuwanu waxay noqonayaan ereyo madhan. Dadku ma rumeysan doonaan qof aan sameynin wuxuu isagu ama iyadu sheegayo.
Markaad fuliso waxaad rumeysan tahay, waxay leedahay saameyn, waxayna faa iido u tahay nolosha kuwa kale. Saameyntani waxay ka dhigeysaa dadka inay na xusuusiyaan, waxaanan ku helnaa tixgelin isdaba joog ah Sidaa darteed, waxaad xoogga saartaa ficiladaada inta aad xoogga saareyso qorsheynta.
Hadaad aragto inuu qof wax badan balan qaadayo, had iyo jeer raadso ficiladooda. Waxay kuu sheegi doontaa dabeecadooda. Way fududahay in la fahmo sida qofku u waafaqsan yahay wax qabadkiisa. Ha aaminin kuwa ku dhaca inay ereyadooda ku kacaan ficil.
Marka qofku wax sameeyo, isaga ama iyadu waa inay sameyaan intii karaankooda ah si ay u gaaraan. Haa, waa run in ballanqaadyada oo dhan aan lagu hayn karin duruufo aan la hubin awgood, laakiin waa dadaalka muujiya oo lagu tirinaayo.
Markaad jabiso kalsoonida qof, inta badan macquul ma ahan inaad dib u hesho. Helitaanka aaminaadda sidoo kale way adag tahay sidoo kale. Sidaa daraadeed, u rumow ereyadaada oo u rogo ficil saameyn leh. Tani waxay dadka ka caawineysaa inay kugu aaminaan oo ay dhisaan xiriiro adag.
Sidaa darteed, aad uga taxaddar sida aad ula macaamilayso kalsoonida. Ogow cidda aad aaminaysid iyo sida aad qof kale u sii aamintid sidoo kale. Waxay kaa caawinaysaa inaad kasbato ixtiraamka oo aad naftaada u qaabeyso qof aad ku tiirsan tahay.
Ha aaminin xigashooyinka
Erayo murtiyeed xikmad leh
Quotes Jacaylka iyo Kalsoonida
Erayo macno leh
Xigashooyinka ku saabsan Erayada
Xigashooyinka ku saabsan Erayada iyo Falalka
Trust Quotes Sawirro
Erayo caqli badan
Erayada caqliga leh ee xikmadda
Ereyada xigasho xigasho xigmad
Wax wanaagsan ha ku dumin maanta adiga oo ka fikiraya xumaan shalay. Iska daa. - Qarsoodi
Shalay shalay waxaa laga yaabaa inaysan fiicneyn, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad lumi doonto rajooyinkaaga oo dhan…
Da'daadu ma qeexeyso qaan gaadhnimadaada, buundooyinkaagu ma qeexeyso caqligaaga, iyo xanta ma qeexeyso qofka aad tahay. - Qarsoodi
Adduunyada maanta dadku waxay ilaaween naftooda dhabta ah. Dadku maalmahan waxay qeexayaan kuwa kale oo ku saleysan muuqaalkooda kore.
Mararka qaarkood waxa qofku u baahan yahay ma aha maskax maskax badan oo hadlaysa, laakiin waa qalbi buka buka oo dhageysanaya. - Qarsoodi
Dadku waa xayawaan bulsheed. Waxaan u baahanahay qof aan la wadaagi karno dareenkeenna oo aan wadaagno…
Noloshu way ku fiicantahay saaxiibbada dhabta ah, taasina waa run! In kasta oo dad aad u tiro badan oo nagu xeeran, laakiin…